Arsivan'ny fiarovana ara-panahy - fanisana ho an'ny fanjakana
Tag Archives: Fiarovana ara-panahy
Ny ora amin'ny Famerenana amin'ny laoniny izao
Mivoatra haingana ny fiavian'ny Fanjakana ianao.
Gisella Cardia - Tsy ho ela dia ho feno ny Fanahy Masina ireo zanako mahatoky
Miray saina izao ny lanitra sy ny tany
Pedro Regis - Ireo voaroaka amiko dia harovana
Ilaiko ny fahatokisanao sy “be herim-po”.
Pedro Regis - Hisy ny fanenjehana lehibe
Aoka ho feno fanantenana ianao. Izay miaraka amin'ny Tompo dia tsy hahita ny lanjan'ny faharesena.
Ny fanokanana nasionaly ho an'i Maria
Ny zoma 1 Mey, dia ny Famerenam-bava farany an'i Etazonia ho an'i Maria Virjiny Bevohoka
Momba ny finoana sy ny fananana
Ny fahatongavan'ny Fanjakana ho anao irery no tanjonao eo amin'ny fiainana.
Fiarovana amin'ny Chastisement miaraka amin'ny Sakramenta
Amin'ny maha mpikamban'ny Fiangonana antsika, manana fitaovam-piadiana mahavariana isika amin'ny alàlanay…
Fizarana 2: Fr. Michel Rodrigue - Adventures in Medjugorje sy ny hafatra lehibe nataon'i Mary